Hawaasni Oromoo UK waajira BBC fulduratti hiriira gaggeessan – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsHawaasni Oromoo UK waajira BBC fulduratti hiriira gaggeessan
Hawaasni Oromoo UK waajira BBC fulduratti hiriira gaggeessan
Hawaasni Oromoo magaalaalee UK keessaa walitti qabaman hedduun Magaalaa Landan waajira muummee BBC’tti argamuun hiriira gaggeessan.
(bbcafaanoromoo)—Hawaasni Oromoo dhibba hedduun lakkaawaman kun halkan mara imalaa turan magala Landan kan dhufaniif ‘’cunqursaafi dhiittaa mirgaa’’ sirni Bulchiinsaa MM Abiy Ahimad Oromoo irraan gahuuf BBCfi mootummaan UK xiyyeefannoo akka kennu, biyya UK kan jiraataniifi mootummaa kana qeequun kan beekaman Dr. Ittaanaa Habtee BBC’f himaniiru.
‘‘Wanti nuti barbaacha BBC fuulduratti hiriirre inni tokko ajjeechaa mootummaan biyya keenya keessatti adeemsisaa jiru BBC’n loogii malee akka gabaasu waamicha gochuudha. Lammaffan Ajjeeechaa Art. Haacaaluu ilaalchisee qorannoon walabaa akka gaggeefamu sagalee nuti dhageessifne addunyaaf akka nuuf gahaniifi. ’’
”Haqni mootummaa kanarraa eegannu waan hin jirreef addunyaan kana dhagahee qaamni walabaa ajjeechaa kana qoratu akka hundaa’u,” jedhan.
”Gama kaaniin ajjeechaa Art. Haacaaluu hordofee namootni siyaasaa qabaman badii malee kan to’ataman waan ta’eef, dargaggoonni Oromoo guutuu Oromiyaatti badii malee adamsamaa waan jiraniif sagalee isaaniif taanee addunyaatti himachuudha kaayyoon hiriira kanaa,” jedhu Dr. Ittaanaan.
Gaazexeessaan OMN Guyyoo Waariyoo to’annoo jala oole
Jawaar fi kaanis mana hidhaa lafa jalaatti hidhamuu abukaatoon mirkaneesse
Ajjeefamuun Art. Haacaaluu Hundeessaa erga dhagaahamee magaala Landan dabalatee UK keessatti hiriirri mormii yeroo gaggeefamu kun yeroo lammataaf.
Hawaasni Oromoo kun sa’aa lamaaf waajira Muummee BBC fuula duratti sagalee isaanii dhageessisan.
Itti aansuunis Waajira Ministira Muummee UK fuula duratti mormii isaanii dhageessisaa jiru.
Karaa gurguddaan Waajira BBC irraa qabee hanga Waajira Ministira Muummeetti kan jiru hiriirtotaan cufamee akka jirullee Dr. Ittaanaan himaniiru.
Walumaagalatti gaaffiiwwan ijoon hiriirotaa ajjeefamuu Art. Haacaaluun booda gaggeefaman irratti ka’aa jiru bakka lamatti kan qoodan Dr. Ittaanaan, inni jalqabaa qorannoon walabaa mootummaan harka keessaa hin qabne ajjeechaa Haacaaluu qoratee haqa akka kennudha jedhan.
Kan lammataa ammoo, hooggantootni siyaasaa KFO fi ABO, akkasumas namootni siyaasaa maqaan hin beekamne kumaan lakkaawan haalduree malee haa gadhiifaman kan jedhu ta’uus himan.
Dabalataan mootummaan loltoota isaa Oromiyaa keessa akka baasuufi Oromiyaa bulchuuf fudhatama hin qabu kanneen jedhan ta’uullee himan.
Tsahaa Labuu Oromoota UK Magaalaa Landanitti hiriira mormii kana irratti hirmaataa jirudha.
Torban lamaan darberraa kaasee magaalaawwan UK gara garaa keessatti mormii bahaa akka turan ibsuun, hiriira Landan kanaan waajira Muummee BBCfi Ministira Muummee Booris Joonsan duratti bahuun mormii isaanii dhageessifachuu isaanii dubbata.
Kaayyoon hiriira kanaa ajjeechaan Haacaaluu qaama walaba ta’een akka qoratamu, gaggeessitoonniifi miseensonni siyaasaa akka hiikaman, qaamni namoota biyya keessatti warra mormiif bahe ajjeesan seeratti yaa dhiyaatan kan jedhanidha.
Tshaan muuxannoo kanaan dura qabnurraa hiriirri akkasii kun biyyoonni mootummaa Itoophiyaa deggaran akka dhaabbatanii ilaalan gochuun dhiibbaa ni uuma jedheera.
Jiraataa magaalaa Maanchester kan ta’e Tsahaan, sa’aatii afur konkolaachisee Landan akka qaqqabe dubbata.
Jafar Yusuf Hacaaluu New Oromo Music 2020
Guyo Wariyo: OMN journalist who interviewed the late Hachalu Hundessa,